छातीरोग विशेषज्ञ डा निरजको तिहार अनुभव : आहा! बालापनको त्यो तिहार :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
तिहार विशेष छातीरोग विशेषज्ञ डा निरजको तिहार अनुभव : आहा! बालापनको त्यो तिहार
कमला गुरुङ शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८, १७:३१:००
काठमाडौं - वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा निरज बमलाई रमाइलो लाग्ने पर्वमध्ये तिहार पनि एक हो। तिहार भन्ने बित्तिकै उनी दीपावली, देउसीभैलो र सेल रोटीलाई सम्झन्छन्।
सानो छँदा गाउँ घरमा तिहार मनाउँदाको रमाइलो क्षण उनलाई आज पनि याद छ। रातभरी देउसी भैलो खेल्ने, पटाका पड्काउने, साथीसँग रमाइलो गर्ने पल उनलाई प्यारो लाग्छ।
खेल्ने कुद्ने र चञ्चले उमेर। त्यही भएकाले पनि उनले सानो छँदा तिहारमा धेरै बठ्याई पनि गर्थे। पटाका पड्काएर तर्साउने, घरमा फालिदिने जस्ता उटपट्याङ काम पनि उनले गरे।
‘सानो हुँदा तिहारमा धेरै बद्मासी पनि गरियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘ढोका बन्द भएको घरमा पटाका फालिदिन्थे। अनि उनीहरुले हामीलाई लखेट्थे। त्यो बेला ६÷७ कक्षामा पढ्थेँ। यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि मैले हेक्का राखिन।’
आइएससी गर्दासम्म उनले देउसीभैलो खेल्ने, रमाइलो गर्ने गर्थे। तर एमबीबीएस सुरु भएपछि उनलाई तिहारले खासै छोएन।
‘तिहार त बालापनकै रमाइलो,’ उनले भने, ‘आहा बालापनको त्यो तिहार कम्ता रमाइला थिए। अहिले पनि सम्झँदै रमाइलो लाग्छ।’
हाल तिहार मनाउने शैलीमा परिवर्तन आएको उनी बताउँछन्। आधुनिकीकरणले गर्दा पनि तिहार मनाउने शैलीमा परिवर्तन आएको र मौलिकता हराउँदै गएको अनुभव उनले गरेका छन्।
‘पहिले एउटा समूह बनाएर घर–घरमा देउसीभैलो खेल्नेको भीड हुन्थ्यो। आफैँ गाउने नाँच्ने चलन थियो। तर अहिले म्युजिक बजाएर देउसीभैलो खेल्छन्। विस्तारै तिहारको मौलिकता हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ’ उनले भने।
बढ्दो उमेर र जिम्मेवारीले तिहारप्रतिको मोह पनि अलि कम हुँदै गयो। चिकित्सकको रुपमा काम गर्न थालेपछि सधै उनले वर्षेनी तिहार मनाउन पाएनन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै उनले काम गर्न थालेको १४ वर्ष भएको छ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये उनी पनि एक हुन्। गत वर्ष पनि उनले तिहार मनाउन पाएनन्। यस वर्ष पनि कोभिडका बिरामीलाई हेर्नुपर्ने भएकाले तिहारको रमझमले उनलाई खासै छोएको छैन।
यस वर्ष तिहारमा केही योजना नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘तीन/चार दिनको त बिदा छ। तर म प्रत्येक दिन आउँछु। किनभने आइसीयु, कोभिड वार्डमा बिरामीलाई हेर्नुपर्छ।’
अझ उनले त गएको वैशाखदेखि एकदिन पनि बिदा लिएका छैनन्। कोभिड बिरामीको उपचारमा उनी निरन्तर खटिरहेका छन्। कोभिडका बिरामी केही घटेपनि जोखिम अझै रहेको उनी बताउँछन्।
तिहार मनाउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि अनिवार्य रुपमा पालना गर्न उनको आग्रह छ। धेरै भीडभाड नगर्न, मास्क लगाउन र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न उनी आग्रह गर्छन्। खोपको दुवै मात्रा लगाएका व्यक्तिहरु पनि संक्रमित भइरहेको भन्दै उनले कोरोनालाई हेलचक्र्याई नगर्न सुझाव दिन्छन्।
उनले भने, ‘जोखिम अझै पनि कम भइसकेको छैन। खोपको दुवै डोज लगाएका व्यक्तिहरु पनि संक्रमित भइरहेका छन्। त्यसैले तिहार मनाउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मनाउनुपर्छ।’
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित ५८ मिनेट पहिले